Maninona ny orinasanao no tokony ho vonona amin'ny finday amin'ny fialantsasatra | Martech Zone
Maninona ny orinasanao no tokony ho vonona amin'ny finday mandritra ny fialantsasatra
Zoma 22 Novambra 2013 Zoma 22 Novambra 2013 Douglas Karr
Miakatra ny asabotsy kely sy ny zoma mainty, ity infographic ity dia mitady hanazava ny antony maha-zava-dehibe ny fanomanana ny orinasanao ho an'ny fety. Ireto misy antony enina ahazoanao miomana amin'ny finday ho an'ny orinasanao mandritra ny fialantsasatra avy amin'i Tamara Weintraub, Manager Marketing amin'ny atiny, ReachLocal.
Miantehitra amin'ny finday ny mpanjifa
Mitady fampahalalana eo an-toerana izy ireo
Mampiasa Fikarohana finday izy ireo
Tian'izy ireo ny tolotra fialantsasatra
Miantsena amin'ny fitaovana maro izy ireo.
Mamaky mailaka amin'ny finday izy ireo
Mobile Marketing dia manan-danja tokoa ary ilaina amin'ny orinasa kely ankehitriny. 65% amin'ireo mpanjifa amerikana no manana finday avo lenta ary 35% manana tablette. Ka inona no andrasanao? Tamara dia mamaritra ny antony lehibe tokony hamarinan'ny orinasanao kelikely ny finday amin'ny fialantsasatra mba hahazoana antoka fa hampitomboina ny varotra.
Tags: fivarotana fialantsasatrafetyFivarotana finday sy tablettefifanakalozana findayfiantsenana findayfiantsenana
Commun.it: Fitantanana Community Twitter mora
Tsy nahomby ny varotra: Rehefa manimba bebe kokoa noho ny tsara ny teknolojia